Wed, Jan 22, 2020 at 7:23pm
कोरोना भाइरस के हो ? बच्ने उपाय के छन् ? #आहा खबर# राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी पूरा #आहा खबर# अस्ट्रेलियामा फेरि दन्कियो आगो, स्थिति नियन्त्रण बाहिर #आहा खबर# एमसीसी पास गरे घातक हुन्छ : भीम रावल #आहा खबर# प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश बोकेर विष्णु पौडेल प्रचण्ड निवासमा #आहा खबर# समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ : मन्त्री विश्वकर्मा #आहा खबर# ‘नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’ #आहा खबर# तस्करीले भन्सार राजस्वमा कमी #आहा खबर# मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रारुप छिट्टै ल्याइने : मन्त्री ढकाल #आहा खबर# दिपक मनाङ्गेविरुद्ध एन्फा कास्की अध्यक्ष गुरुङकाे जाहेरी #आहा खबर# सुदूरपश्चिमको बेरोजगारी अन्त्य गर्छौँ : मुख्यमन्त्री भट्ट #आहा खबर# शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र विजयी #आहा खबर# बाइस दिनदेखि हुम्लामा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द #आहा खबर# सभामुख चयनको काण्डले राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय रुपमा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ : नेता महर #आहा खबर# मोबाइलमा कुरा गर्दा कति खर्च भयो ? यसरी अनलाईनबाटै हेर्न सकिन्छ हरेक महिनाको बिल #आहा खबर#
काठमाडाैं, १ असाेज ।
अब ६५ वर्ष उमेर कटेका मानिस बैंकका संचालक तथा गभर्नर बन्न नपाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संचालकको अयोग्यताका विषयमा यो उमेर हदको व्यवस्था गरिन लागेको हो।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा १ 'क'मा यो व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपी सो विधेयक संसदमा छलफल हुने क्रममा छ। संसदबाट विधेयक हुबहु वा संशोधनसहित पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ। प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा सूचना जारी गरी नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
हाल बैंकको संचालकका लागि २५ वर्ष नपुगेको व्यक्ति अयोग्य हुने व्यवस्था रहे पनि अधिकतम उमेर हद तोकिएको छैन। यद्यपी साउन २० गते राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत ७० वर्ष कटेपछि संचालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले साउन २८ गते उमेर तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अब भने यसलाई ऐनमै व्यवस्था गरिने भएको हो।
त्यस्तै राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गभर्नरसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिको पनि उमेर हद तोकिएको छ। सो ऐनको संशोधन विधेयकमा दफा २१ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा संचालकको अयोग्यताका लागि उमेर हद तोकिएको छ।
अब न्यूनतम ३५ वर्ष पुरा नभएका र ६५ कटेकाहरु गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा संचालक बन्नका लागि अयोग्य हुने छन्। यसअघि अयोग्यतामा उमेरहदको विषय तोकिएको थिएन।
कोरोना भाइरस के हो ? बच्ने उपाय के छन् ?
अस्ट्रेलियामा फेरि दन्कियो आगो, स्थिति नियन्त्रण बाहिर
प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश बोकेर विष्णु पौडेल प्रचण्ड निवासमा